Iwu 21 maka Ikike Mgbasa Ozi N'uba | Martech Zone
Iwu 21 maka Usoro Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Na Mọnde, Nọmba 19, 2013 Na Mọnde, Nọmba 19, 2013 Douglas Karr
Enweghị m mmasị na okwu "iwu" mgbe ọ na-abịa Social Media Marketing, mana ekwenyere m na anyị nwere ahụmịhe zuru ezu na ọmụmụ ihe iji ghọta ebe ụlọ ọrụ mere nnukwu ọrụ iji tinye usoro mgbasa ozi ma kpoo ya. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe di egwu n’itinye olile anya na ntuziaka mgbe obula n’inwe usoro mgbasa ozi gi.
Dị ka ihe ọ bụla, enwere iwu edeghị ede na mgbasa ozi mgbasa ozi. Iwu ji onye ọ bụla ịgbaso iwu ndị a, mana ndị ahụ dị ọhụụ na egwuregwu ahụ nwere ike tufuo isi. Nke a bụ iwu 21 edeghị ede nke mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta na-eme iji mepụta ntọala siri ike maka mgbasa ozi mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla.
Ihe omuma ihe meputara site na Usoro Ọhaneze Pro, WordPress ngwa mgbakwunye nke na-agbaso tweets, mmasị, pin, + 1s na ndị ọzọ ziri ezi na WordPress Dashboard!
Tags: infographiciwu nke mgbasa ozielekọta mmadụ media infographicna-elekọta mmadụ media iwu
Budata Ihe Nleba Info 100 maka $ 59
Otu PPC Na - eme Ka Inbound Marketing
Dee 5, 2013 na 2: 50 AM
N'ezie dị ezigbo mma post t. Ekele maka ozi a bara uru.
Ọrụ SEO mpaghara
Jan 9, 2014 na 5: 19 AM
N'ezie oké post mara banyere "Infographic: Iwu 21 maka Irè Social Media Strategies", ekele maka ozi ..
Internetlọ Ahịa Internetntanetị
Jan 9, 2014 na 5: 51 AM
Ọfọn, multimedia na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na mmadụ niile nọ n'ụwa na-ahụ ụwa na-atụfu nkà ihe ọmụma ndị ọzọ na ndepụta ndị ọzọ ..
Jan 25, 2014 na 7: 21 AM
Ezi blog, biputere n'ụzọ okike iji ghọta.
Mar 1, 2016 na 11: 54 AM
Ezigbo ozi, enwere m ike ịtụgharị akwụkwọ ozi gị ma bipụta ya?
Anọ m na mpaghara nwere ndị na-asụ spanish, ya mere, ọ ga-adị mma ma anyị nwee asụsụ anyị.
Mar 1, 2016 na 12: 43 PM
N'ezie! Naanị jide n'aka na ị ga-enye onye mbipụta akwụkwọ mbụ ahụ otuto karịa m.